Fandraharahana iray manokana : mikatso ny varotra fiara efa niasa eto Antananarivo | NewsMada
Fandraharahana iray manokana ny varotra fiara efa niasa eto Antananarivo. Eo Analalely, Anosy, Andranobevava, azo sokajina ho tsena lehibe amin’ireo varotra fiara ireo. Betsaka amin’ireo ny avy any Eoropa, La Rénuion, efa niasa telo, dimy taona, nahavita 100.000 km raha ny salanisa. Saingy, tsy ahitana antontanisa mazava ny isan’izy ireo, firy marina ny miditra eto Madagasikara isan-taona ? Ny vidiny eto an-toerana, manodidina ny 5 tapitrisa Ar hatramin’ny 60 tapitrisa Ar, arakaraka ny karazany.
Mikatso ny varotra ankehitriny, tsy mitovy ny tany amin’ny taona 2010-2012, raha ny filazan’ireo mpivarotra. Fiara roa na telo no lafon’ny olona iray ao anatin’ny herintaona. Tsy manambola ny olona, saika ireo mpitatitra ihany no mpividy ireo fiara ireo. Mpitatitra iray, mety manana fiara dimy, misy manana hatramin’ny 20 na 30 manao taxi-be eto Antananarivo. Koa raha tsy tena misy simba tanteraka, mamono antoka ny tompony ireny fiara ireny, tsy vonona mihitsy izy ireo hividy solony. Antony iray hafa mampikatso ny varotra ny fahamaroan’ny tolotra, ankoatra izany ny vola lany amin’ny fikarakarana taratasy isan-karazany sy ny kolikoly any anivon’ny raharaham-panjakana.
Iza no tena mpanafatra sy mpivarotra ireo fiara efa niasa ireo ? Sokajin’olona maro : ny manambola mbola mampiasa olon-kafa mifampiraharaha amin’izay hividy ; ao ireo efa “mpilalao fiara”, nisafidy io sehatra iray io, nahazo tombony be tany am-boalohany ka tsy mahazaka hiala amin’izany intsony ; misy ireo maromaro mampiasa vola mitambatra amin’izany, ny sasany miantoka ny tena vidin’ny fiara, ny hafa miantoka ny famoahana azy any amin’ny ladoany sy izay mety hifanarahan’izy rehetra.